Momba anay - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd.
Ny vokatray dia manaraka ny fenitra momba ny kalitao sy ny injeniera ISO 9001: 2015. ISO9001 fanamarinana dia fototra fitantanana orinasa. Ny vokatray rehetra dia azo ampiharina amin'ny rano manondraka rano ho an'ny fambolena, ny fambolena, ny bozaka ary ny fanondrahana zaridaina.
Manana tambajotra fivarotana iraisam-pirenena misy sampana 3 any amin'ny firenen-kafa. Ny ankamaroan'ny vokatray dia zaraina amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 40.
Mandritra izany fotoana izany dia afaka manome ny consultation teknolojia sy serivisy ho an'ny rano manondraka mitete sy vahaolana mikoriana microspray ho an'ny mpanjifa rehetra izahay.
Izahay dia manizingizina hatrany hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa ary mametraka ny tombontsoa ho an'ny mpanjifa aloha. Nandritra ny telopolo taona lasa, namidy tamin'ny faritra samihafa any Sina ny vokatray ary nanondrana tany amin'ny firenena 40 sy faritra manodidina an'i Eropa, Amerika, Afrika, Moyen Orient ary Azia.
Tongasoa ianao hitsidika anay ary handefa ny fanontanianao.
Nanangana orinasa mpamokatra sarimihetsika iray amin'ny fambolena.
Namokatra ny kasety fanondrahana mitete tsipika roa voalohany ao Shina.
Nanangana laboratoara fitiliana sy fanaraha-maso ary nanomboka nanome
Serivisy fanaraha-maso ho an'ny mpanjifa mila rehetra
Manangana orinasa sampana any Dubai.
Manangana orinasa sampana any Hainan, Sina.
Maninona Izahay Mingwang
Manana ekipa fikarohana sy famolavolana siantifika, natokana ho an'ny fampandrosoana sy ny famokarana vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao.
Afaka mamokatra sy manome karazana vokatra fanondrahana isan-karazany isika, toy ny Tape Irrigation Drip, Sodina Main Water, Tape Micro Spray, Fittings, Sprinklers sns.
Serivisy fanondranana matihanina